01/07/2011 : SVND :Miharihary loatra ny fijaliam-bahoaka
Tonga nitondra ny anjara birikiny amin’ny fampanjakana ny zon’ny ankizy tany amin’ny Distrikan’i Miandrivazo ny fikambanana SVND nanomboka ny Alatsinainy lasa teo. Famorana ankizy sy tanora 125 avy amina kaominina roa any an-toerana no asa natao. Lavitra toeram-pitsaboana ny ankamaroan’ny tanàna ary tsy vitsy tamin’ireny ihany koa no snikatona vokatry ny tsy fahampian’ny famatsiana fitaovana sy hoenti-manana hany ka tsy mahagaga raha maro ny tanora voakasik’ity famorana faobe ity. Nampiarahina tamin’izany asa soa izany ny fampahafantarana sy fanazavana mikasika ny Zo fototra ananan’ny tsirairay avy.
Tsapa sady tena miharihary ny fahamarinan’ny tatitra isan-karazany mikasika ny tsy fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara rehefa manadihady ifotony tahaka izao nataon’ny fikambanana SVND izao. Tsy ny lafiny fahasalamam-bahoaka ihany no tsy voajery intsony tao anatin’ny taona maromaro izay fa olana sosialy anisan’ny mampitaraina ny mponina ihany koa ny tsy fisian’ny hoenti-manana hampianarana ny ankizy sy ny firongatry ny asan-dahalo.
30/06/2011 : 97 no isan’ireo tsy manan-tsiny giazan’ny FATE any am-ponja hatramin’ny 2009 (+vidéos)
Roa taona izao no nijoro hitam-poko hitam-pirenena ny fikambanan’ireo mahery fon’ny firenena 2009. Ity fikambanana ity dia ivondronan’ireo izay niharan’ny antsojay ny Fat. Misy ireo naratra, ireo manana havana namoy ny ainy, ireo manana havana nigadra, ireo very asa, izany hoe ireo rehetra iharan’ny krizy mivantana. Androany dia nihaona tamin’ny mpanao gazety izy ireo ka nanao antso avo mikasika ireo havany any am-ponja ka mbola tsy notsaraina na ihany koa tratry ny fitsarana tsy ara-drariny.
Fa fantatra ihany koa fa ny 07 sy 08 Jolay izao dia hiverina hiakatra fitsarana avokoa ireo miaramila izay nogadraina amin’izao fotoana noho ny raharaha 07 Febroary. Isan’ny haverina ny fitsarana ny Jeneraly Raoelina, ny adjudant Fikisy ary ireo namany. Tokony hijoro tsara amin’ny maha fitsarana tsy mitanila azy moa ny fitsarana raha ny fanirian’ity fikambanana ity.
29/06/2011 : Toamasina : tsy mahavelona ny “cyclo-pousse” (+vidéo)
Aman-jatony ny posy tarihina amin’ny bisikleta eto Toamasina. 4000 Ariary isan’andro no anofana izany ho an’ireo mivelona aminy ary tsy misy fetrany ny salan-taona fa manomboka amin’ny 16 taona ny kely indrindra ary maherin’ny 50 taona ny zokiny indrindra no manao ity asa ity.
Ho an’I Désiré manokana dia ataony vadin’asa ny fitarihana “cyclo-pousse”. Miambina orinasa no asany amin’ny alina ary ny tapakandro atoandro izy no manao ity asa ity. Ny tapak'andro manaraka kosa dia natokany mba hialany sasatra. Na izany aza mbola mikaikaika ihany ny tovolahy telo taona taorian’ny naombohany ny asa satria “tsy mahafeno ny hofan-trano akory” ny vola azony amin’ny fitondrana posy noho ny vidim-piainana ateraky ny krizy.
16/06/2011 : Arivonimamo : ben’ny tanàna an’ny FATE nanodina miliara maromaro (+vidéos)
Telo taona taty aoriana vao tratra ny gaboraraka nataon’ity ben’ny tanàna ao Arivonimamo ity. Tao anatin’izay fotoana izay dia namidiny tamin’ny fomba tsy mendrika ny tany saika hanitarana izany tananàn’Arivonimamo izany. Rehefa tratra anefa ranamana dia ny mpiara-miasa aminy ihany no nasainy nibaby ny ota vitany. Ny mahagaga ny mpanara-baovao dia efa tany am-ponja ity ben’ny tanàna ity sy ireo namany 13 volana vitsy izao.
Ankehitriny anefa dia mivanaka ny mponina mahita izay ben’ny tanàna izany miverina miasa ao amin’ny biraony ary na ny ora fidirany aza “toa mazoto loatra”. Fantatra fa amin’ny 06 ora maraina dia efa ao amin’ny biraony izany ben’ny tanàna izany. Vokany dia velom-panontaniana ny mponina satria tsy misy mahalala izay didy nivoaka momba azy ireo nefa dia miverina miasa tsara izy sy ireo 10 mirahalahy nivoaka miaraka aminy. Ny telo mirahalahy ambiny kosa dia mbola any am-ponja ary hibaby ny helok’I “Maîre” sy ny akolitany.
Araky ny filazan’ny fianakavian’ny voafonja dia fony mbola tao amin’ny fonjan’Arivonimamo izy telo mirahalahy ireo dia nampanaovina taratasy. Koa satria ny Bianco no nanao ny fanadihadiana dia nambaran’ilay ben’ny tanàna fa aleo manao ilay taratasy fifanekena satria hisy handoa ilay vola tsy hita. Rehefa nanao sonia izany anefa izy telo mirahalahy dia nodradradradrain’ny ben’ny tanànana fa izy ireo no mpangalatra ny volan’ny kaomina. Hatreto izany dia gorobaka 100 tapitrisa Ariary mahery ny volan’Arivonimamo ary ireo nihinam-be indray no afaka sy niverina hitondra ny kaomina.
Efa ela nitoratorahana ny Ben'ny tanàna :
14/06/2011 Manomboka ny filaharana solika
Nandritry ny herinandro maro izao dia tsy ampy intsony ny famatsiana solika eto an-drenivohitra. Ny herinandro teo izao dia 70% amin’ny tinadin’ny renivohitra ihany no azo nojifaina. Vokany nilaharana ny tobin-tsolika androany ary niteraka fanelingelenana lehibe tamin’ny fifamoivoizana izany. Ny dikan’izany dia mety ho avy tsy ho ela indray ny fiakaran’ny vidim-piainana raha toa mbola maharitra izany fahabangana izany. Raha ny vaovao voaray dia ny TOTAL sisa no manana tahiry azo amidy fa ny mpandraharaha hafa dia efa sahirana avokoa amin’izany sehatra famatsiana solika izany.
Mahagaga ihany fa teo ambanin’ilay trano nanaovan’ny manamboninahitra mpomba an’ny FATE an’ilay fanambarana dia nisy tobin-tsolika nilaharana. Saingy izy ireo indray no sahy nilaza fa “efa miverina amin’ny laoniny tsikelikely ny fiainam-bahoaka”.
28/05/2011 : « Aza mitsahatra mitondra am-bavaka ny Firenena » hoy Rtoa Lalao RAVALOMANANA (+vidéos)
17/05/2011 : Ambohitsaina : voahosy ny « franchise universitaire » (+vidéos)
Nirefodrefotra ny « grenades lacrymogènes » ary tsy nisalasala niditra ny faritry ny anjerimanontolo ny hery famoretana. Ireo ny vokatry ny hetsika nataon’ny mpianatra teny Ankatso androany. Tsy nahazaka ny lazonady nataon’ireo mpitokona ny EMMOREG ka nanery azy ireo hiala ny toerana nanaovana fihetiketsehana am-pilaminana. Niantsy ady tamin’ny mpianatra nitokona ireto hery famoretana ireto ka dia nihemotra tany amin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra.
Sary teny Ankatso
Tsy nijanona tamin’izany anefa ireo « be boty » fa nandefa baomba mandatsa-dranomaso avy hatrany ary nirefotra tao anatin’ny fefin’ny toeram-pianarana ireo “grenades” ireo. Nentin-kafanam-po ny mpianatra sady nasesiky ny tahotra noho izany ka dia niaro tena tamin’ny tora-bato avy hatrany. Teo anefa dia nanao amboletra ireto « matanjaka » ka nanaraka ireo mpianatra hatrany anatin’ny faritry ny oniversite mihitsy sady tsy nitsahatra nanapoaka baomba.
Mbola tsy tonga tamin’izany ny toe-draharaha dia efa nampita hafatra hoan’ny mpitandro filamianana tamin’ny alalan’ny mpanao gazety ireto mpianatra ireto. Nisy manko ny mpitarika nahazo ompa tamin’izy ireo raha iny haka kodiarana nakorisan’ny mpianatra iny sady narahin’ny miaramila teny hoe « tifirinay eo ialahy ry ilay … ity ». Notsorin’ireo mpianatra fa tsy mbola nisy manerana ny tany izany mpianatra mangataka hianatra ampihorohoroana amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika izany.
Hanao ahoana ny tohin’ny fitakiana
Nandritry ny hetsika androany dia nisy ny fampitam-baovao nentin’ireo mpianatra tamin’ireo mpiara-mitolona aminy. Nisy, araky ny nambaran’izy ireo, ny fifampiresahana tamin’ny SECES nanontaniana azy ireo sao mba efa misy rirany kosa ny fitakiana ka zary ho mpila vaniny fotsiny ireo mpianatra. Mazava ny valin-tenin’ny Filoha Nasionalin’ny sindikan’ny mpampianatra mpikaroka : « tsy misy tara-masoandro hatreto ».
Tsy vitan’izany anefa fa toa misy sampam-pampianarana atao ambony sy ambany eo amin’ny anjerimanontolo. Misy ireo efa mampianatra nefa tsy mbola mazava ny hoavin’ny fampianarana. Isan’ny tsy eken’ireto mpianatra ireto izany ka nanapahany hevitra ny hamoaka ireo mpianatra ireo. Ny fampianaran’olom-bitsy rahateo tsy ahafahana mamita ny taom-pianarana fa rehefa miditra dia miara-manomboka avokoa.
Ambiansy teny Ankatso :
16/05/2011 : Niverina nitokona ny mpianatra eny Ankatso
Tonga saina ny mpianatra fa fampiandriana adrisa fotsiny ny fampanantenana nomena azy ireo momba ny fidirany mianatra. Tamin’ny fotoana nampafana ny fitokonana teny Ankatso manko dia nampiantso fihaonana tamin’ny solotenan’ireo mpianatra ny FATE tamin’ny alalan’ny ministry ny fampianarana ambony. Nanatrika ny fihaonana tamin’izany ny ministry ny vola sy ny teti-bola an’ny FATE. Tamin’izay no nampanantenana ireto mpianatra fa ho fantatra mialohan’ny 16 May 2011 ny daty hiverenan’ny fampianarana. Tonga nefa ny fe-potoana androany tsy hita izay rirany amin’ny fianarana.
Nifanantona tamin’ny SECES ary androany ireto mpianatra ireto ka nanontany ny marina momba ny hoavin’ny fianaran’izy ireo. Nanamafy ny Filoha Nasionalin’ny sindikan’ny mpampianatra mpikaroka fa tsy hiverina hampianatra izy ireo raha tsy efa mivaha ny olany ka azony eny am-pelatanany ireo tombontsoa nampanantenain’ny FATE azy sy ny karama tsy azon’ny hatramin’ny volana oktobra 2009 voasokajy ao anatin’ny atao hoe “heures complémentaires”.
Taorian’izany dia nidina teny amin’ny fiantsoanan’ny zotra 119 indray ireo mpianatra ka nanao sakana tamin’ny andrin-jiro sy kodiarana nodorana. Tamin’ny 01 ora tolakandro no tonga teny an-toerana ary nifanatrika tamin’ny mpianatra ny EMMOREG saingy tsy nisy ny fifandonana. Rehefa ampy ny mpianatra ny fanehoan-kevitra vitany dia niakatra tany amin’ny faritry ny oniversite izy ireo. Nilaza kosa anefa ireto mpianatra ireto fa na eo aza ny fampanantenana ny sampam-pianarana sasany hiditra dia tsy hitsahatra ny fitakiana raha tsy mahita mangirana izy ireo.
09/05/2011 : Zon’olombelona : isan’ny Firenena mampanahy indrindra i Madagasikara (+vidéos)
Nandritry ny famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra nokarakarain’ny “Solidarité aux Victimes du Non-Droit” no nanambaran’i Richard Randriamandranto fa « pays à haut risque » i Madagasikara raha ny fanajana ny zon’olombelona no resahina. Fanadihadiana nataona fikambanana iraisam-pirenena maro no nanaporofoany izany.
Marina fa tsy misy fandripahana (génocide) eto Madagasikara saingy betsaka ny zo fototra tsy voahaja hatramin’ny nitondran’ny HAT.Isan’izany ohatra ny zo hotsaraina hoan’ireo voapanga rehetra. Nanterin’ny mpamelabelatra manokana ny mikasika ny raharaha Ralitera izay efa mihoatra ny roa taona ankehitriny nefa tsy mbola notsaraina izy dimy mirahalahy. Eo ihany koa ny fisian’ny fanagadrana tsy ara-drariny toy ny mahazo ireo mpanohitra rehetra sahy mijoro milaza ny tsy mety eto amin’ny Firenena. Ampahany ihany ireo fa mbola betsaka ny tsy fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara izay iasan’ny mampitarazoka ny fankatoavana iraisam-pirenena. Nambaran’I Richard Randriamandranto kosa anefa fa zon’ny firenena tsirairay ny mankato fitondrana iray saingy ny eto amintsika mihitsy no mbola tsy atokisan’izao tontolo izao na dia efa misy aza ireo firenena vitsy mankato ny FATE.
Mafy loatra ny tsindry hazo lena
Ny fanamarinan-tena ateraky ny tranga misy eto amin’ny Firenena no miteraka ny tsindry hazo lena etsy sy eroa ankehitriny. Ny mpanao azy ireny manko dia miezaka hatrany manamarina ny fihetsika ataony na dia efa hita aza fa manohitohina ny zon’ny hafa izany. Io ilay toetra mitarika any amin’ny didy jadona. Tsy mamaha fa mampitombo ny olana misy izany toetra izany satria miteraka fambolena fahavalo eo amin’ny mpiara-monina.
Fanombohana ihany …
Ho an’ny fikambanana SVND dia fanombohana ihany izao valan-dresaka natao androany izao ao anatin’ny hetsika fitakiana ataon’izy ireo. Mbola ho tohizana hatrany ny ady ho an’ny fampanjakana ny rariny eto an-tanindrazana satria tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy izany. Raha tsy ny zo fototra rehetra no voahaja tsy hiverina amin’ny laoniny ny fiaraha-monina Malagasy ary tsy hahazo fankatoavana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena I Madagaikara. Fototry ny olana tamin’izao krizy izao mantsy ny fanitsahan’olom-bitsy ny safidin’ny vahoaka tamin’ny taona 2006 fony nandany ny Filoha RAVALOMANANA Marc ny Malagasy. Natao tsinontsinona izany ka naleon’I TGV sy ny namany nanongam-panjakana hiarovana ny tombotsoan’izy ireo manokana.
Lahateny fanokafana nataon'i Fetison Rakoto Andrianirina :
FAMINTINANA_NY_FAMELABELARANA.pdf 364.03 Ko